theZOMI: [MoemakaDaily] 21st April - MoeMaKa Daily
[MoemakaDaily] 21st April - MoeMaKa Daily
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း အကြောင်း မှတ်မိတာလေးတွေ
တင်မိုး (ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၃
ဆရာကြီး သခင် ကိုယ်တော်မှိုင်းလို့ အသံကြားရတိုင်း ကြည်ညိုစိတ်၊ လေးစားစိတ်၊ ချစ်ခင်စိတ် ပေါ်လာသည်ချည်း။
ဆိုတဲ့ ကိုယ်ရေးတဲ့ ကဗျာပိုဒ်ကလေးကို ကိုယ့်ဘာသာ သီဆိုရင်း ကြည်နူးပီတိနဲ့ မြင်ယောင်လာသည်ချည်း။
(၁၉၅ဝ) ခုနှစ်က မန္တလေးဘုရားကြီး (၄၅) တာကွင်းကြီးမှာ ဆရာကြီး မှိုင်းကို ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ဆရာကြီးဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးလှည့်ပြီး တရားဟောစဉ်ကပါ။ ဆရာကြီးရဲ့ ခန့်ညားပြီး ကြည်ညိုဖွယ်ရာ ဥပဓိရုပ်၊ အောင်မြင်ပြီး ကရုဏာသံ မေတ္တာသံပါတဲ့ အသံသြဇာ တို့ဟာ နှလုံးသားမှာ စွဲထင် နေရစ်ခဲ့တယ်။
'ဆရာမသေခင် ငြိမ်းချမ်းရေး ရတာကို မြင်ချင်တယ်' လို့ မိဘရဲ့ မေတ္တာစမ်းရေသံကို မမေ့နိုင်ဘူး။
'ကောင်းကျိုး အထွေထွေရယ်နဲ့ ချွန်စေမြစေသော်၊ ဒေါင်းအိုး ဝေရယ်လို့ တွန်စေကစေသော်'ဆိုတဲ့ ဆရာကြီးရဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ ထားတဲ့ စေတနာကို 'ရွှေမြတောင်သာတဲ့ တိုက်ဆီက နေလနှစ် ဆောင်ပါတော်မူတဲ့ အခိုက်' က ကိုယ်တွေ့ဇာတ်လမ်းကို လွမ်းမောတသဖွယ် မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ ဆရာကြီးနဲ့ တပည့်တွေဟာ နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးအတွက် အဆင်းရဲခံ၊ အငတ်အပြတ်ခံပြီး စိတ်ညီလက်ညီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ အတိတ်သမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ပြောင်း အောင်းမေ့တယ်။
ရေနံချောင်း တို့ဗမာညီလာခံသွားရင်း တောင်တွင်းကြီး နယ်ဘက် ဘုရားတွေ လျှောက်ဖူးကြတော့ တောင်တွင်းကြီးနယ်က ဘုရားတွေမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း ခေါင်းလောင်းသံ ဆည်းလည်းသံ တိတ်နေတာကို သတိပြုမိတယ်။အဲဒါနဲ့ တောင်တွင်းကြီး နတ်မှီတောရဝင်ပြီး အရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဝတ်ပြုတော့ အဲဒီနယ်က ဒကာတွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ကြမ်းဝိုင်းမှာ အာလာပသလ္လာပစကား ဆိုဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီမှာ ဘုရားစေတီ တွေမှာ ခေါင်းလောင်းသံ ဆည်းလည်းသံ ဆိတ်ရခြင်းအကြောင်း မေးမိသတဲ့။
ဒီတော့မှ မင်းကြီးရွှေလရောင် အကြောင်း လေးစားဖွယ် သိလာရတယ်။ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့သမားကို ခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ လက်နက်လိုတော့ မင်းကြီးရွှေလရောင်က ဘုရားစေတီတွေထံ ခွင့်ပန်ပြီး ခေါင်းလောင်းတွေ၊ ဆည်းလည်းတွေဝေ မစချီးမြှောက်တော်မူပါဘုရား။ သူ့ကျွန်ဘဝက လွတ်မြောက်ရင် ခေါင်းလောင်းတွေ ဆည်းလည်းတွေ ဝေနေအောင် လှူဒါန်းပါ့မယ်ဘုရားလို့ လျှောက်ထားပြီး ခေါင်းလောင်းတွေ၊ ဆည်းလည်းတွေဖြုတ်၊ အရည်ကျိုပြီး ပန်းပဲဖိုမှာ လက်နက်တွေ လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပဲ။ အဲဒီလို ခုခံတိုက်ခိုက်နေတော့ တောင်တွင်းကြီး တစ်နယ်လုံး အင်္ဂလိပ်က မသိမ်းပိုက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတယ်။
ဒီတော့ မင်းကြီးရွှေလရောင်ခေါ် ဗိုလ်မင်းရောင်ရဲ့ ခေါင်းကို ဆက်နိုင်ရင် ဆုတော်ငွေ ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ ချီးမြှင့်မယ်လို့ ကြေညာရသတဲ့။ ဒီတော့ အင်္ဂလိပ်ကပေးတဲ့ ဆုတော်ငွေကို လိုချင်မက်မောတာနဲ့ ကိုယ့်တပ်ထဲက ကမြင်းမသား စစ်ဗိုလ်တချို့က မင်းကြီးရဲ့ဦးခေါင်းကို ဖြတ်ပြီး အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့လက်ကို အပ်လိုက်သတဲ့။ ဒါကြောင့် 'ဖျင်းလှတဲ့ ကမြင်းမအကောင် ဗိုလ်တချို့ရယ်က ကိုယ့်ဖို့အလွတ်ရုန်းရော့ထင်၊ တောင်ကုန်း သာသာယာယာ မြင်းမဏိစခန်းဆီက တရှောင်ရှောင်ပုန်းကာ မင်းအမိအရ ဖမ်းချင်ကြတဲ့ပြင်' လို့ ဆရာကြီးမှိုင်းက မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအခါ ရွာကဒကာတွေက အဲ . . .ဗိုလ်မင်းရောင်ရဲ့ မြေးကလေး အခုရှိပါသေးကော၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ စာသင်နေတယ်ဆို ထင်ပါရဲ့ လို့လည်း ပြောလိုက်ရော ဆရာကြီးမျက်စိထဲမှာ ဌာနချုပ် တို့ဗမာအစည်းအရုံးမှာ အမြဲလာနေတဲ့ မှုန်တေတေ အကောင်လေး ဖြစ်ရော့မလားလို့ စဉ်းစားမိလိုက်သတဲ့။ ရန်ကုန်ရောက်ရင်တော့ ဒီကောင်ဆိုတာ ကလေးကို မေးစမ်းကြည့်ရဦးမယ်လို့ စိတ်ထဲ မှတ်ထားလိုက်တယ်။ သူ့နာမည်က အောင်ဆန်းဆို ထင်ပါရဲ့လို့ လူကြီးတွေက ပြောလိုက်သတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ဆရာကြီးမှိုင်းဟာ အောင်ဆန်းအကြောင်း၊ အောင်ဆန်းတို့အဘိုး ရွှေလရောင်ခေါ် ဗိုလ်မင်းရောင် အကြောင်း၊ ဒီအောင်ဆန်းဆိုတဲ့ ကောင်လေး ဦးစီးခေါင်းဆောင်ပြီး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ နယ်ချဲ့ကို တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြောင်း၊ အောင်ဆန်းကျဆုံးတဲ့ အခါကျတော့ သီလသမာဓိရှိပြီး စိတ်ကောင်း၊နှလုံးကောင်း ရှိတဲ့ မောင်နုကို ခေါင်းဆောင်တင်ကြကြောင်း၊ နားထောင်ချင်စဖွယ် ခင်းကျင်းပြောပြပါတယ်။ မောင်နုကတော့ ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည် နည်းရှာတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူကောင်းတစ်ယောက်မို့ ခေါင်းဆောင် တင်မြှောက်ရတာမို့ ပုံခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဗြဟ္မာ့ဘုံ နွားခုန်တက်သလိုပေါ့ကွယ်လို့ ပြောလိုက်တော့ ပရိသတ်တွေ တအုန်းအုန်း ရယ်မောကြပါတယ်။
ဒီတော့ သူမနာကိုယ်မနာ သင်ပုန်းချေပြီး ငြိမ်းချမ်းအောင် ဆောင်ရွက်ကြဖို့ ဆရာကြီးက တိုက်တွန်း လှုံ့ဆော်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးဟာ သားသမီးတွေ မညီမညွတ် ရန်စစ်ခင်းနေကြတာကို မြင်ရတဲ့မိဘရဲ့ စေတနာမျိုးနဲ့ အိုကြီး အိုမပေမယ့် တကြောင့်ကြကြ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။
'ယခင်အခါ ထမ်းပိုးတည့်တည့် ထမ်းခဲ့ကြတဲ့ စိုးနဲ့သန်းကိုလည်း တစ်မျိုးကွဲလွမ်းသူ၊ ဆရာဖအေမှာဖြင့် မာပါစေသာပါစေ ဆုမွန်တောင်းတဲ့ အပြင် ကမ္ဘာ အေးစေတီ ဒါယကာ မောင်ရွှေနုကိုလည်း အောင်ဇေယျတု အောင်ဇေယျတုနဲ့ မေတ္တာပို့လိုက်တဲ့ ဆိုတဲ့အတိုင်း သုပုန်နဲ့ အစိုးရအကြား ပြည်တွင်းစစ်မီးမပွားအောင် အားကြိုးခနဲ့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆရာကြီးမှိုင်းဟာ အလွန်ဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့ သူတော်စင် ပညာရှင်ကြီးပါ။ သူ့ကိုယ်ကျိုး၊ သူ့အရေး၊ သူ့အတွက် တစက်ကလေးမျှ စဉ်းစားသူမဟုတ်ပါ။ ဒီလို ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို လုံးဝ မထားနိုင်အောင် စွန့်လွှတ်ခဲ့တဲ့အတွက် မြင့်လည်းမြင့်မြတ်၊ မှန်လည်းမှန်ကန်၊ စေတနာအမှန်နဲ့ ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ မီးရှုးတန်ဆောင် ဖြစ်ရခြင်းပါပဲ။
(https://www.facebook.com/syhminemyanmar?ref=stream ဒီနေရာကနေ ယူပါတယ်)
No comments: Labels: For the record, Tin Moe
ဇော်အောင် (မုံရွာ)၊ ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၃
ဆရာကြီးပီမိုးနင်း ၁၉၃၀ခုလောက်က ရေးခဲ့သည်။ မြန်မာပြည်တွင် လေထဲတွင်ပျံမည့်လေယာဉ်ပျံသန်းဖို့ တီထွင်နေသည်ဟု သတင်းဖတ်လိုက်ရသောကြောင့်၊ စိတ်ပျက်မိကြောင်း၊ သူများနိုင်ငံများတွင် လေယာဉ်ကို ဥဒဟိုမောင်းနှင်နေပြီဖြစ်ရာ ထိုလေယာဉ်ကိုဝယ်ယူပြီး၊ ပြည်တွင်းတွင်အသုံးချရမည့်အစား အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်ခံပြီး လေယာဉ်ကို အစမှစတင်တီထွင်နေသော မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်အကြောင်း ဖြစ်သည်။ ဆရာကြီးပီမိုးနင်း၏ တိုးတက်ရေး Attitude စိတ်နေသဘောထား စာများသည် ယခုခေတ်တိုင်အောင် အသုံးကျနေဆဲ။ သူ၏စာအုပ်များမှာ ယခုတိုင် ထုတ်ဝေရောင်းချနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်က မြန်မာ့စာပေသမိုင်းတွင် စာအရေးနိုင်ဆုံး၊ အထူးချွန်ဆုံး စာရေးဆရာဟု မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ရပါသည်။
ဆရာကြီးပီမိုးနင်းက တိုးတက်ချင်ရင် တီထွင်တာ အသာသာထား၊ ကော်ပီ (အတုခိုး) လုပ်ကိုင်ဖို့ အဓိကဟု ဆိုပါသည်။
ကျနော် စက်မှုလုပ်ငန်းများအကြောင်း ရေးသားခဲ့ရာ၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ စက်မှုလုပ်ငန်းများအကြောင်း ဆောင်းပါးများရေးသားခဲ့သည်။ ယခုရေးမည့်အကြောင်းမှာ လယ်ယာထွက်ကုန်များ၊ ပြည်ပထုတ်လုပ်ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်သောကြောင့်၊ အတွေ့အကြုံမရှိသော ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ရေးချင်စိတ် အားကြီးသဖြင့် စက်မှုနောက်ခံဖြင့် အနည်းငယ်ရေးလိုပါသည်။
ယခင်ကတော့ အမှောင်ပိတ်၊ စစ်အစိုးရအောက်တွင်နေထိုင်ခဲ့ရသောကြောင့် လူအများ၏ ဦးနှောက်ကို ဂွင် (ပေါ်ပင်) အလုပ်များ၊ အကြံဖန်များ၊ ပါမစ်များနောက်သို့ လိုက်ပြီး စီးပွားရှာစားခဲ့ရသည်။ ယခုလည်း မလွတ်နိုင်သေးပါ။ သို့သော် မကြာခင် လူဟောင်းများကျန်ရစ်ခဲ့မည်ဖြစ်ပြီး၊ အတွေးခေါ်သစ်၊ စိတ်နေသဘောထားပြောင်းနိုင်သူများ ကြီးပွားအောင်မြင်တော့မည်ဖြစ်သည်။
The Voice စာစောင်ဖြင့် နိုင်ငံသိခဲ့ရသော ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် ဆိုသူ၊ ယခင်က စစ်အစိုးရ အကြိုက်လုပ်နေသူဟု ကျနော်အပါဝင်၊ ယူဆခဲ့ကြသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြုလုပ်သည့်ရွေးကောက်ပွဲကို ထောက်ခံသူဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း ရွေးကောက်ပွဲက ကြိုတင်မဲများစွာတွေ့ရပြီး၊ စိတ်ပျက်ခဲ့သူ။ သို့သော် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ပီပီပြင်ပြင်မလုပ်ဆောင်နိုင်သေးခင် သူ့ကို မော်လမြိုင်စာပေဟောပြောပွဲကြီးတွင် ဖိတ်ကြားခဲ့ရာ၊ မြန်မာပြည်တွင်အကြီးကျယ်ဆုံး သံဃာနှင့်ပြည်သူများစွာ ၅ရက်ဆက်၊ စာရေးဆရာများစွာ ဟောကြားရာတွင်၊ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင် မိနစ်၄၀ ဟောပြောခဲ့ပါသည်။ သူကိုယ်တိုင် အမေရိကန်တွင် ပညာသင်ကြားခွင့်ရခဲ့ပြီး၊ မြန်မာပြည်ပြန်လာကာ ကျောင်းဖွင့်ပြီး၊ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့်စာသင်သူ ဆရာဖြစ်သောဖြစ်ကြောင်း၊ စာပေဟောပြောပွဲဖိတ်ကြားမှုကြောင့် ပထမဆုံး စာပေဟောပြောပွဲဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးဟောပြောပွဲလည်း ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ထိုဟောပြောပွဲအပြီး ၂လအကြာ ဒေါက်တာနေ၀င်းမောင်တယောက် အသက်၄၈နှစ်အရွယ် နှလုံးရောဂါဖြင့် ရုတ်တရက် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။ သူကွယ်လွန်ပြီးနောက် နိုင်ငံပြောင်းလဲမှုများ အရှိန်အဟုန်ရရှိလာသည်။
သူဟောပြောချက်ကို အကျဉ်းချုပ်ရလျှင် (၁)လက်ရှိနိုင်ငံရေး (၂)အခြေနေသစ်မှာမွန်ပြည်နယ်အစိုးရ ဘာလုပ်နိုင်သနည်း (၃)လူငယ်ကြီးပွားရေး (ပညာရေး) တို့ကို ပြောခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးပညာရေးတွင် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအကြီးကဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ဦးသန့်၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပန်းတနော်မြို့တွင် မွေးဖွားကြီးပြင်းလာပြီး၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပညာသင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ထိတ်တန်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖို့ သူသင်ကြားခဲ့သော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပညာရေးအဆင့်မှာ အလွန်မြင့်ခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားသည်။ ယခုခေတ် ပညာရေးနိုမ့်ကျသွားပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ ပညာတတ်များ၊ ယခု မော်လမြိုင်မြို့မှ ဦးသန့် ကဲ့သို့လူမျိုး ပေါ်ထွက်လာရန်၊ အလွန်ခဲယင်းသွားပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ပညာရေးကို မြှင့်တင်လျှင် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း၊ ပြည်နယ်အစိုးရက ပုဂ္ဂလိကကျောင်း တည်ထောင်ခွင့်ပေးရန် ဥပဒေ ပြဌာန်းပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ အသက်၅၅နှစ်ကျော် ပညာတတ်လူကြီးများက ဦးဆောင်ပြီး အမြန်ဆုံး ပုဂ္ဂလိကကျောင်းများ တည်ထောင်သွားပါက မကြာမီ၊ အင်္ဂလိပ်လို ပြောတတ်၊ နားထောင်တတ်၊ ရေးဖတ်တတ်သော ပညာတတ်လူငယ်ကလေးများစွာ ပေါ်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာရပ်ကိုလေ့လာဖို့ အင်္ဂလိပ်စာနှင့် ရေးဖတ်၊ပြော၊နားထောင်နိုင်မှ ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဖြစ်မည့်အကြောင်း။ ဘိုလိုပြောဆို၊ဖတ်မှတ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးကြောင်း ကိုယ်တွေ့ပြောကြား၊တိုက်တွန်းခဲ့သည်။..
၁၉၈၈နောက်ပိုင်း စီးပွားရေးဖွင့်ပေးသော်လည်း လူအများမှာ ပိတ်ပင်ခံနေရပြီး၊ လုပ်ခွင့်ရသော လူတစ်စုသာ ပန်းတိုင်သို့ရောက်သည့်စနစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခု ပညာတတ်သူများစွာ ပန်းတိုင်ရောက်မည့်စနစ် စတင်နေချိန်တွင်၊ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၊ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့မှ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များ၏ ခြစားမှု၊ Rank Seeking များကို ပြစ်ဒဏ်ချရန်လိုနေပြီ။ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ထွက်ကုန်များအကြောင်းကို ပညာရေးဖြင့် အဖွင့်စာရေးရခြင်းမှာ ပညာရှင်များက ဦးဆောင်လုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ တရုပ်၊ဂျပန်၊အမေရိကန် ပညာတတ်များ ဦးဆောင်မှုနောက်ကို လိုက်မည်လား၊ တိုင်ဝမ်၊ ထိုင်း၊ အိန္နိယ၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား ..စသည့် မြန်မာထက် ပညာရေးကောင်းသော အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံသား ပညာတတ်များဖြင့် ကော်ပီလုပ်ပြီး တိုးတက်အောင်လုပ်မလား။?
စက်မှုလယ်ယာသို့မြန်မာပြည်က အလုပ်လုပ်သူ အားလုံး၏ ၇၀% သည် လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ လူဦးရေ သန်းပေါင်း ၆၀ ရှိလျှင် ၄၂သန်းက လယ်ယာလုပ်ငန်းပေါ် မှီခိုနေသည်။ အလွန်များပြားလှတဲ့ လူထုကြီးဖြစ်သည်။ သူတို၏ လယ်ယာလုပ်ငန်း တိုးတက်စေဖို့ စက်မှုလယ်ယာ နည်းစနစ်များကို ပြောင်းလဲရမှ ဖြစ်သည်။ သမရိုးကျ နောက်ချေး၊ နွား၊ မိုးရေနဲ့ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးသည့် ခေတ်ကို ပြောင်းလဲရပါမည်။ သို့မှသာ အဆင်းရဲဆုံးလူတန်းစား တောင်သူများရဲ့ ဘ၀ကို မြှင့်တင်ပေးဖို့ လက်တွေ့ကျပါမည်။ ပြောဆို၊ ညွန်ကြားနေသည်ထက် လက်တွေ့လုပ်ဖို့ အရေးကြီးနေပါသည်။ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များလည်း ဆရာစံအရေးခင်းလို ဆင်းရဲတွင်းနက်နေသော တောင်သူအရေးခင်းကြီးများဖြစ်လာလျှင်၊ သိပ်ခက်သွားနိုင်ကြောင်း သိရှိ၊ သတိပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ ခက်တာမှာ ရင်းနှီးမြှတ်နှံသူများက လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုံးဝဆို၊ လုံးဝ မရင်နှီးချင်ပါ။ နှစ်ရှည်လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး အမြက်သိပ်မရ။ သယံဇာတရောင်းစားသောလုပ်ငန်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာပါမစ်လုပ်ငန်း၊ သွင်းကုန်လုပ်ငန်း (အရောင်းအ၀ယ်)၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး များက 100% မကသော အမြက်တွေ တစ်နှစ်အတွင်းရနိုင်သောကြောင့် ထိုကဏ္ဍများကိုသာ ရင်းနှီကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ရင်းနှီးမှုမလုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတော် ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုကသာ အဓိကဖြစ်နေပါသည်။
မည်မျှချေးငွေ လိုအပ်ပါသနည်း.. ဥပမာ..US$20 billion တန်ဖိုးအတွက် 20% = US$4 billion ချေးငွေ နိုင်ငံတော်မှ အသင့်ပြင်ထားပေးရပါမည်။
တကယ်တော့ အစိုးရခေါင်းဆောင်များမှာ သူဌေးအကြီးစားဟုရေးလျှင်၊ အမျိုးသားစိတ်ဓါတ်ကြီးသော၊ ခေါင်းဆောင်ကောင်းများစွာကို ထိခိုက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အစိုးရကို
၂။ ပြည်သူလူထုကို အလုပ်လုပ်ချင်လာအောင် မက်လုံးပေးသူများ (Motivators) ဟုဆိုပါက ပိုမှန်ကန်ပါမည်။
အခွန်ကို မှန်ကန်စွာကောက်ခြင်းကြောင်း လက်ရှိ အခွန်ရရှိငွေ 4.5% of GDP ကနေ 10% လောက်တိုးတက်လာဖို့ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ 17% ရရှိပြီး၊ တိုးတက်သော အနောက်နိုင်ငံများမှာ 40% အထိ အခွန်ကောက်ရငွေများလှပါသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က မြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအခွန် ကန်ဒေါ်လာ 1 billion usd ရခဲ့သည်။ ယခု ၂၀၁၂တွင်4billion usd အထိ ရလာသောကြောင့် တော်တော်တိုးတက်လာပါသည်။ အစိုးရသစ်အတွက် အစကောင်းသည် ပြောရပါမည်။ နောက်တစ်ချက် - ပြည်သူလူထုကို အလုပ်လုပ်ချင်လာရန် ကား(ပို့ဆောင်ရေး) နဲ့ တယ်လီဖုန်း (ဆက်သွယ်ရေး) ၊ ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ စသည်တို့ ဈေးချိုအောင် လုပ်ပေးရပါမည်။ တရားမ၀င်အခွန်တောင်းရမ်းမှု လျှော့ချရေးကတော့ အခုချိန်မှာ အခက်ခဲ့ဆုံးပါ။
မြန်မာ့လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ပြည်ပထုတ်ကုန်မြှင့်တင်ဖို့ .. အခြေခံအကျဆုံးမှာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သော ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ Process Industry စက်မှုစားကုန်လုပ်ငန်းများကို မြန်မာပြည်သို့ ရွှေ့ပြောင်း၊ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်စေဖို့ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုင်း စက်မှုစားကုန်လုပ်ငန်းများ FDI များစွာဝင်လာကြပြီ။ တရုပ်စက်မှုစားကုန် စက်ရုံများပဲဝင်လာလျှင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.. လက်ခံမလား..?
ဓါတ်ခွဲခန်းများ၊ Commercial Certificates စမ်းသပ်မှု၊ စံချိန်စံညွှန်းများကို အစိုးရက ဦးဆောင်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါသည်။ ပညာတတ်လူငယ်၊လူကြီးများ လိုအပ်လာပြန်ပါသည်။ ဟိုးတုန်းကတော့ ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်တွင် စားသောက်ကုန်ဒီပလိုမာသင်တန်းရှိပါသည်။ အခုလည်း ရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း စက်ပစ္စည်းမရှိ ဖြစ်နေပါသည်။ ရန်ကုန်ဓါတုဗေဒဌာနတွင် အိုင်စီ B.Sc (IC) ဆိုတဲ့ ပညာဘွဲ့ပေးပါသည်။
အထူးအခွင့်ရေး အခွန်လွတ်ခွင့်၊ သွင်း၊ထုတ်ကုန်သွယ်မှုမှာ ရရှိဖို့ အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေခ်ျမှာ ပြည်ပပို့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဆိုရင် အခွန်မကောက်တဲ့အပြင် အားပေးတဲ့အနေနဲ့ ဆုချမှုတောင်ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံများက Made In Vietnam ဗီယက်နမ်ပြည်တွင်းထုတ်ပစ္စည်းတွေဆို အခွန်၊ သိသိသာသာ လျှော့ပေါ့ပေးခြင်းအားဖြင့် အခွင့်အရေးပေးပါတယ်။ WTO လို အဖွဲ့အစည်းတွေက ဆင်းရဲနိုင်ငံများကို ဦးစားပေးဖို့၊ အခွန်နည်းနည်းပဲ ကောက်ဖို့ လမ်းညွှန်၊ကြပ်မတ်ပေးပါတယ်။
အထက်ပါ လုပ်ငန်းများအတွက် အစိုးရချည်း လုံးဝမတတ်နိုင်ပါဘူး။ ပညာတတ် မြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ၊ နည်းပညာရှင်များ၊ တက္ကသိုလ်ကောလိပ်များက စုပေါင်းပါဝင်၊ ၀န်ဆောင်ပေးဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ သို့မှသာ တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးများက ကုမ္ပဏီးကြီးများရဲ့ မတရားဈေးနှိမ်၊ အကြပ်ကိုင်ခံရမှုကို ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့လည်း အမြဲဆက်သွယ်ထားရပါမယ်။
ဓါတ်ခွဲခန်များ၊ စံနှုန်းစနစ်များကိုလည်း ကမ္ဘာ့အဆင့်တန်းဖြစ်ရပါမယ်။
လယ်ယာလုပ်ငန်းအခြေခံလိုအပ်ချက်များ- ရေရရှိရေးအတွက် ရေရရှိရေးက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ သမရိုးကျ မိုးရေပဲ အားကိုးလို့ မရပါ။ အစိုးရဆယ်မြောင်းရှိရင်တော့ အိုကေပေမဲ့ အများစုကတော့ ရေအခက်ခဲရှိပါတယ်။ မုံရွာမြိုနယ်၊ မုံရွေးမှာ ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဦးဆောင်ပြီး ဆည်မြောင်းတစ်ခု ပုဂ္ဂလိကတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ အဲဒီမုံရွေးတ၀ိုက်ရွာများ ရေလုံလောက်လို့၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးများအောင်မြင်ပြီး၊ ကျေးရွာလူထု ဘ၀မြင့်မား၊အဆင်ပြေလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ မြစ်ချောင်းရေများကို အသုံးပြုနိုင်ဖို့။ အစိုးရသိပ္ပံနည်းပညာ ညွန်ကြားရေးမှုးချုပ်တစ်ဦးက မြေအောက်ရေရရှိရေး (အ၀ီဝိတွင်း) ကို အထူးစိတ်ဝင်စားပြီး နိုင်ငံခြားအကူညီရဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေပဲ လုပ်ကိုင်ရမှာပါ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုရင် ရေမြောင်းတွေ ပုဂ္ဂလိက ဖောက်ထားပြီး၊ အနီးနားက လယ်ယာစိုက်ပျိုးသူတွေက ရေ၀ယ်သုံးကြပါတယ်။
- နည်းပညာ (မျိုးစေ့၊ မြေသြဇာ၊ စက်ကရိယာများ)ကလည်း အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ မျိုးစေ့များကို နိုင်ငံတော်က တာဝန်ယူပေးရပါမယ်။ နောက်တခု မြေသြဇာကို တရုပ်နိုင်ငံက အကြီးကျယ်တင်သွင်းပါတယ်။ အခြားနိုင်ငံများကလည်း တင်သွင်းပါတယ်။ မြေသြဇာရမှာ အထွက်တိုးနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ မြေသြဇာက ပြည်တွင်းမှာ စက်ရုံများနဲ့ ထုတ်လုပ်ဖို့ အလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ ရေရှည်မှာတော့ ပြည်တွင်းထုတ်မြေသြဇာများပဲ သုံးဖို့ရှိပါတယ်။ စက်မှုနည်းပညာများ၊ စက်ကရိယာများကတော့ နွားလှည်းက အခြေခံသုံးနေဦးမှာဖြစ်ပေမဲ့၊ အရေးကြီးတဲ့အချိန် လယ်ထွန်စက် (ထော်လာချီ) လိုယာဉ်မျိုးက အလွန်အသုံးကျပါတယ်။ အခြား အသေးစား စက်ကရိယာများစွာလည်း လိုအပ်ပါတယ်။
- ချေးငွေ။ စင်ကာပူက SMU စီမံခန့်ခွဲမှုဘွဲ့ရပြီး ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ အတွေ့ကြုံရှိသူ မြန်မာလူငယ်တစ်ဦးပြောပြချက်က၊ ၁၉၁၀-၁၉၃၀ အတွင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပြည်ပဆန်မရောင်းချတဲ့ နိုင်ငံမှ ကမ္ဘာ့နံပါတ်(၁) ဆန်တင်ပို့ရောင်းချတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ချစ်တီးကုလား ငွေချေးလုပ်ငန်းများကို ဗြိတိသျှအစိုးရက အိန္နိယကနေ ခေါ်လာ၊ လုပ်ခွင့်ပေးလို့ ဖြစ်ပါတယ် ..တဲ့။ ဆင်းရဲလို့ တောင်သူလယ်သမား အရေးတော်ပုံဖြစ်ရခြင်းဟာ ချစ်တီးကုလားများကြောင့်လို့ လက်ညိုးထိုးခဲ့ပေမဲ့၊ ချေးငွေကို စနစ်တကျ ချေးပေး၊ စပါးပြန်ကောက်၊ အတိုးရင်းငွေပြန်သိမ်း လုပ်နိုင်တဲ့ ချစ်တီးကလားများ အဓိကဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အခု မြန်မာအစိုးရက တောင်သူများကို ချေးငွေပေးခဲ့ပေမဲ့၊ အဲဒီချေးငွေရလာရင် လုပ်ငန်းထဲ သုံးဖြစ်အောင် မကွပ်ကဲနိုင်ပါဘူး။ ပြီးတော့ လယ်ယာလုပ်ငန်း ငွေပေါ်ချိန်မှာလည်း၊ ချစ်တီးကုလားများက အတိုးကြီးတော့ နောက်ဆုံး လယ်ယာပေါင်နှံပြီး၊ လယ်ဆုံးရှုံးသွားတာမျိုး.. အခုခေတ်မှာလဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ လယ်ပိုင်ရှင်လူတန်းစားတရပ်က ချစ်တီးကုလားပုံစံ ပေါ်ပေါက်နေပါတယ်။ လယ်ယာခရိုနီလို့ ပြောရမလား။ ဟုတ်ပါတယ်..ချေးငွေ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ပညာနည်းတဲ့ တောင်သူများကို ချေးငွေစနစ်တကျ သုံးစွဲရေးကို နိုင်ငံတော်က လယ်ယာပညာတတ်များက ဦးဆောင်ပညာပေးရပါမယ်။
- Clan လို့ခေါ်တဲ့ ရပ်ရွာအကြီးကဲများ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ပညာနည်းပါးတဲ့ တောင်သူလယ်သမားများအပေါ် သူတို့ရဲ့ သြဇာလွမ်းမိုးမှု ကြီးမားလှပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများမှာ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်က ဒါစိုက်၊ ဒီလိုစိုက်၊ ဒီမြေသြဇာသုံး၊ ဘယ်သူ့ဆီရောင်း .. စသဖြင့် တချက်ပြောလိုက်ရင်၊ ရွာသားများက လိုက်နာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရွာသူကြီး၊ လူကြီးများကို ပညာပေးရေးက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ဒေသအလိုက်ဖြစ်စေ၊ လူမျိုးစုအလိုက်ဖြစ်စေ .. ရွာသူကြီးလို သြဇာရှိသူများ၊ စုပေါင်းပြီး ညီညွတ်စွာ လယ်ယာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ ရှိရပါမယ်။ ဒါမှ အပြင်က စီးပွားရေးသမားများရဲ့ အမြက်ထုတ်၊ အခွင့်အရေးသမားများရဲ့ အကြံဥာဏ်များကို တွန်းလှန်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။
FAO export အချက်အလက်များအရ မြန်မာပြည်။ ပဲအမျိုးမျိုး (မတ်ပဲ၊ ပဲတီစိမ်း၊ ကုလားပဲ၊ဆိုယာပဲ)၊ မြေပဲ၊ နှမ်း နေကြာ၊ ဌက်ပျောချောက်(plantain)၊ ပလောပီနံ(Cassava)၊ နေကြာ၊ ၀ါဂွမ်း၊ ကွမ်းသီး (Areca nut)၊ သကြား၊ ရာဘာ၊ ၀ါဂွမ်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ထူးဆန်းတာသည်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေးအသီးအနှံများ မြန်မာ၊ ဗီယက်နမ်တို့လို ထွက်တယ်။ export အများဆုံး ထွက်ကုန်မှာ ရာဘာဖြစ်ပါတယ်။ usd 3b ကျော် export လုပ်တယ်။ ဗီယက်နမ် usd 1b Export လုပ်နိုင်ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် လယ်ယာတွေသိမ်းပြီး သူဌေးများ ယခုမှစိုက်နေကြတယ်။ မွန်၊တနင်္သာရီရှိ ရာဘာစိမ်းများမှာ ထိုင်းနိုင်ငံထွက်ကုန်ဇြစ်သွားလေသည်။ ဗီယက်နမ်တွင် မြေလွတ်များစွာကို ၊ ရာဘာ အများကြီးစိုက်ထားကြသည်။ နှစ်၃၀လောက် ခံသောအပင်ဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ရာဘာစိမ်း မထုတ်တော့ပါ။ ရာဘာကုန်ချောများသာ ပြည်ပပို့ကုန် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် စိုက်ပျိုးရေးအသီးအနှံများစွာကို Prepared Food အနေဖြင့် ပြုပြင်၊ စားဖို့အသင့် ဗူး၊အထုတ်များအဖြစ် ပြည်ပထုတ်လုပ်ရောင်းချပါသည်။ လယ်ယာထွက်ကုန်သာမက သားငါးများလည်း Prepared Meat အဖြစ် အိတ်စပို့လုပ်ပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှာ ၁၂% of GDP ဖြစ်သော်လည်း Process Industry အရမ်းဖွံ့ဖြိုးသောကြောင့် ကုန်ချောများစွာ ပြည်ပပို့၊ အမြက်အရမ်းထွက်ပါသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ကုန်ချောစက်ရုံများကို မကြာခင် ထိုင်းစက်ရုံများစွာ ရောက်ရှိလာပြီးလျှင် မြန်မာ Process Industryတိုးတက်လာလျှင်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများစွာ အလုပ်ရမည်။ တောင်သူများ အလုပ်ရမည်။ ဆင်းရဲခြင်းလဲ နည်းပါးသွားပါမည်။
ဗီယက်နမ် Cashew nuts, ရာဘာ၊ ပလောပီနံ၊ မြေပဲ၊ ဘယ်ရီသီး၊ ထောပတ်သီး၊ သရက်သီး၊ မာလကာသီး၊ နာနတ်သီး၊ ကော်ဖီ၊ လဘက်ခြောက်၊ သရက်-မာလကာ၊ ငြုတ်စသဖြင့် သီးနှံ မြောက်များစွာ ထွက်ပါသည်။ ဗီယက်နမ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ၁၅နှစ်အတွင်း အသီးအနှံထွက်ကုန်များမှာ ကန်ဒေါ်လာဘီလျှံပေါင်းများစွာ အံ့သြဘွယ် ၀င်ငွေရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများစွာ ပြည်တွင်းတွင် အလုပ်အကိုင် အလွန်ပေါများသွားပါသည်။ ဗီယက်နန် တောင်သူအမျိုးသမီးငယ်များအဖို့ တရုပ်ပြည်တွင် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ကျွန်ခံ၊ ဇနီးသည်အဖြစ်ရောင်းစားခံရခြင်းများမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာပြည်လည်း တရုပ်၊ ယူနန်ပြည်နယ် စီးပွားရေးသမားများ ကြီးစိုးမှုမှ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်လိုလျှင်
၁။ ဗီယက်နမ် လယ်ယာလုပ်ငန်းများကို အစိုးရက အားပေး၊ပံ့ပိုးနေခြင်းကို ကော်ပီ (အတုယူ) သင့်ပါသည်။
၂။ အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ လယ်ယာ၊စက်မှုလုပ်ငန်းများ Process Industry များ မြန်မာပြည်အတွက် ကော်ပီ (အတုခိုး) သင့်ပါသည်။
ထပ်မံရေးလိုသည်မှာ ..မြန်မာများ.. မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် ..တစ်ကစပြီးမလုပ်တော့ရန် သတိပြုရပါမည်။
နာဂစ်ဆားငံရေ၀င်တဲ့ဒေသများ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးအောင်မြင်နေခြင်း၊ ငါးမွေးမြူရေး ပြည်ပပို့မှု မကိုက်သောကြောင့်ရပ်နားလိုက်ရသော ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂ ခေတ်များတွင် ငါးကန်များမှ ငါးများ၊ အစာကြွေးရန်မလိုပဲ ကြီးထွားလာပြီး၊ ဖမ်းယူရောင်းချနိုင်ခြင်း၊ မြန်မာပြည်တ၀ှမ်း လယ်ယာများမှထွက်သော သီနှံများ အရည်အသွေးကောင်းမွန်ခြင်း...စသည့် မြန်မာပြည်အရင်းခံ ရေမြေအနေထား အလွန်ကောင်းခြင်းကို ရထားပါသည်။ အစိုးရပဲ ကောင်းဖို့လိုပါသည်။ ပြည်ပပို့ကုန်များ ၂၀၁၀ မှာ ပဲအမျိုးမျိုး၊ နှမ်း၊ ဆန်၊ ကုလားပဲ၊ အသီးခြောက်များ အဓိကဖြစ်ပြီး၊ ပြောင်း၊ ငြုတ်၊ ကြက်သွန်၊ ၀ါဂွမ်း၊ သကြား၊ ဆိုယာပဲ၊ တို့ ဒေါ်လာ ၃သန်းကျော်ဖိုးစီ တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သဘာဝရာဘာ၊ သဘာဝပျားရည်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဟင်းရွက်ခြောက်၊ နှမ်းပစ်၊ အမဲခြောက်၊ လဘက် စသည်တို့အနည်းငယ် (ဒေါ်လာတစ်သန်းခန့်) တင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၂ မှာ သန်းပေါင်း၅ထောင်ဖိုးလောက် (အချက်အလက်များ မှန်းခြေ) တရှိန်ထိုးရောင်းချခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
Reference: Trade data from FAO website
မြန်မာပြည်တွင် ဆန်းကုန်သည်အသင်း၊ ပဲကုန်သည်အသင်းများ အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။ အခြားအသင်းများ ဥပမာ အထည်ချုပ်အသင်း၊ ကွန်ပြူတာအသင်း စသည်တို့လည်း ရှိပါသည်။ အစိုးရမလုပ်နိုင်သောအဖွဲ့ များစွာပေါ်ရပါမည်။ အစိုးရသြဇာကင်းပြီး၊ အစိုးရကသာ ထိုအသင်းများလိုအပ်ချက်များကို ပံ့ပိုးရပါသည်။ ဥပမာ ..သရက်သီး ပြည်ပတင်ပို့လိုပါက အသင်းအဖွဲ့ရှိရမည်။
ထိုအသင်းဖွဲ့များဖြင့် ပထမ ပြည်တွင်းဈေးကွက် အရင်ရှာဖွေရမည်။ အသီးအနှံများ တစ်ပြည်လုံး ဈေးညီသွားအောင် အခွန်(ဌာနဆိုင်ရာမှတောင်းရမ်းခြင်း) နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သက်သာရမည်။ ပြည်ပပို့ကုန်အတွက် ကိုးရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊ထိုင်း၊တရုပ် ထုတ်ကုန်များကို အနောက်နိုင်ငံများသို့ရောက်ရှိနေထိုင်ကြသော ကိုးရီးယား၊ဗီယက်နမ်၊ထိုင်း၊တရုပ်များက ဈေးကွက်ရှာပေးကြပါသည်။ ယခုအခါ အချို့အနောက်နိုင်ငံကြီးများနှင့် ကိုးရီးယား၊ဂျပန်စသည်တို့က Made in Myanmar ကုန်စည်များကို အခွန်လွတ် tax free promotion ပေးနေသည်ဟု ဆိုသည်။ ကိုယ့်နိုင်ငံထွက်ကုန်များကို ကိုယ့်နိုင်ငံသားများက ပြည်တွင်းမှာ အားပေး၊သုံးဆောင်သလို၊ ပြည်ပမှာလည်း အားပေးသုံးဆောင်၊ ညွှန်းရပါသည်။ ပြည်တွင်းမြန်မာအင်အားစုနှင့် ပြည်ပမြန်မာအင်အားစု ၂ခုတို့ ဆက်သွယ်ပေးသော စီးပွားအဖွဲ့အစည်းများ မြန်မာအစိုးရကလည်း အားပေး၊ကူညီ၊ လမ်းညွှန်ရပါမည်။ ဥပမာ Myanmar Chamber of Commerce Office.
ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ် စားသောက်ကုန် စက်မှုလုပ်ငန်းများ Process Industry မြန်မာပြည်တွင်းသို့ ၀င်ရောက်ရင်းနှီးလာကြပြီဖြစ်သည်။ မြန်မာတောင်သူလယ်သမားများအဖို့ Export တွက်ခြေကိုက်ပါက မိမိသဘောကျ လွတ်လပ်စွာ၊ အမြန်ဆုံးစိုက်ပျိုးနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ Product of Myanmar ကုန်ချောများကို တိုက်ရိုက်ပြည်ပရောင်းချနိုင်ဖို့ မဝေးတော့ပြီ။
ဇော်အောင် 16 April 2013
ပြုပြင်ပြီး အစားအသောက်၊ သားငါး၊ စည်သွတ်ဗူးများ (ပြည်တွင်း၊ပြည်ပအတွက်)
No comments: Labels: News Features, Zaw Aung (monywa)
ကာတွန်း ကူမိုးကြိုး - အတိုက်အခံ ပြောလိုက်ဘီ
ဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၃
စွန့်လွှတ်လမ်းခွဲလိုက်ရတဲ့ အတ္တတွေ ...။
သူ့အလိုကျ လိုက်ပါစီးမျောရမယ်လား ...။
အမေ့ မျက်ရည်စတွေနဲ့အတူ ထားရစ်ခဲ့ ...။
ရင်ခုန်သံ မတူတော့တဲ့ တခါက ချစ်ခဲ့ရသူများ
လမ်းခွဲရမယ့် အဖြစ်တွေက ဘ၀မှာ တပုံတပင် ...။
၂၅ နှစ်ဆိုတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ထဲမှာ
ကျဆုံးခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူအာဇာနည်တွေရဲ့ သစ္စာတရား
လူမှာ ဒီထက် ဘာက တန်ဖိုးအရှိဆုံးလဲ ...။
အဲဒီ ကျောပိုးအိတ်ကို ဆက်လက်လွယ်ပိုးရင်း ... ။ ။
No comments: Labels: ကမာပုလဲ
ကယ်ပါတိုင်းက ဟိုင်းနဲ့ ဟယ်လို (သို့မဟုတ်) မင်းတြားကြီး၏ နို့ဆီခွက်စီမံကိန်း
သရုပ်ဖော်ကာတွန်း - လိုင်လုဏ်
ယခုအခါသမယသည်ကား ကယ်ပါတိုင်းသားတို့ ဟိုင်းဟိုင်း ဟယ်လိုဟယ်လိုများ မိုက်ရိုင်းချင်တိုင်းမိုက်ရိုင်း၊ ထွားကျိုင်းချင်တိုင်းထွားကျိုင်းနေသည့် အချိန်အခါကြီး ဖြစ်ချေပေတော့သည်တမုံ့။ တဟိုင်းဟိုင်းနှင့် အင်တာနက်၌ မြင်ရာအက်ဒ်၍ ထင်ရာချက်နေကြလေပြီ။
နို့ဆီခွက်တလုံးဆီကိုင်၍ ဟယ်လိုဟယ်လိုနှင့် ဘယ်ကိုရယ်မဟုတ်၊ ဘယ်လိုရယ်မဟုတ် နှုတ်ဇောင်းထက်နေကြပေပြီ။ ယခုအခါ မင်းတြားကြီး၏ဘုန်းတော်ကြောင့် လူကြီးမင်း ဆိုသောအသံတော်ကြီး ပြည်လုံးသိမ့်သိမ့် တုန်တော်မူတော့မည်တည်း။
အင်တာနက်ဆိုသဟာနှင့်ပတ်သက်လျှင် ကယ်ပါတို့ကိုကျွန်ပြုထားသော ဟိုးတိုးတက်လှပါသည်ဆိုသော စိနတိုင်းသား ကျေးဇူးတော်ရှင်သခင်များသည်ပင်လျှင် ကယ်ပါတို့ကို အားကျငေးမော့ ရှီဖော့လုပ်နေရပေချေပြီ။ သို့ပေသော်လည်း ဘုန်းတော်ကြောင့်ပင် ကွန်နက်ရှင်ဆိုသဟာချင်းတော့ မြင်းကျိုးနှင့်ကျည်ဆံရထားပြိုင်ပြေးရသလို အနှေးမှာသရဖူဆောင်းထားနေပေချေသေးသည်တကား။
ကယ်ပါတို့တိုင်းကြီးကား ကျိုင်းပြီးရင်းကျိုင်းနေပေပြန်တော့ရာ ယခုနို့ဆီခွက်ခေတ်ကြီးသည်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများမှဂျိုကုတ်ပိုင်ရှင်တို့ထိ၊ ကုမ္ပဏီကြီးမှသည် အကြော်တဲထိ၊ လွှတ်တော်မှသည်ထန်းရည်ဆိုင်ထိ ရောက်ရှိသွားပေတော့မည်။
ကယ်ပါတိုင်း၌ တရံရောအခါကမှစကာ ယခုထိပင် ဆက်သွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍လော်ကြီးနှင့် ဟစ်အော်၍ " ဟယ်လို ဟယ်လို ရွာတောင်ပိုင်းက မဂွက်ထော်၊ခင်ဗျားရဲ့မလေးရောက်လင်တော်ဆီမှ ဖုန်းလာနေပါတယ် " ဟုလှမ်းခေါ်ပြီးသကာလတဖက်ရွာမှလည်း ယင်းသို့ပင် လော်ကြီးနှင့် " ဟယ်လို ဟယ်လို" ဟုအသံပြုလေသောအခါ " အားလုံးနေကောင်းကြလား " တဲ့၊ " အငယ်ကောင်တော့ချူချာတယ် " တဲ့၊ " ဆေးခန်းမပြဘူးလား " တဲ့၊ " ဆေးခန်းကနှစ်ရွာကျော်မှာဆိုတော့ ရေမန်းတိုက် ထားတယ် " တဲ့၊ " အမေ့ကိုသတိရတဲ့အကြောင်းပြောပေးပါ " တဲ့၊ " အင်းအင်း " တဲ့ စသဖြင့် နှစ်ရွာသိ၊သုံးရွာသိ ပြောဆိုဆက်သွယ်ရသည့် ကမ္ဘာ့ရှားပါးယဉ်ကျေးမှုကြီးမျိုးတုံးပျောက်ကွယ် သွားပေတော့မည်။ ယင်းသို့ လော်နှင့် ဆော်ရသည်ကားတရံရောအခါက ဆက်သွယ်ရေး၌ ဘီလူးမောင့်ကြောင့် ထောင့်နေသောဟူ၏၊
ယခုဘုရင်မင်းတြားကြီးကိုယ်တော်တိုင် ကယ်ပါတွေလူနေမှုကြွဇောင်းဇောင်းဖြစ်စေရန် မဟာကရုဏာတော်ထားသဖြင့် ဘီလူးကိုအစွယ် ချိုးကာ သူ့လက်စွဲတော်သန်လျက်ဖြင့် လော်ခေတ်ကို ခုတ်ဖျက်တော့မည်ဟူ၏။
"ဤနေရာတွင် ဖုန်းလိုင်းမိသည် " ဟု အိမ်တဝိုင်းထဲမှာပင် ဟိုနားတကွက် သည်နားတကွက်၊ ထုံးကွက်ထားရသော လိုင်းဆွဲအားတို့နှင့်် ဘုန်းတော်ကြောင့်မည်သို့ ဟယ်လိုရအောင်လုပ်လေမည်ကိုလည်း ကယ်ပါတိုင်းသားများအထူးစိတ်ဝင်စားနေပေချေသေးသည်။
သို့ပေတမို့၊ ကယ်ပါတိုင်းတွင် ယင်းနို့ဆီခွက်ပြဿနာကား အမှိုက်မှသည်ပြဿာဒ်မီးလောင်တော့မည့် ကိန်းဆိုက်နေပေပြီ။အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်း ကြိတ်ကြိတ် ကြိတ်ကြိတ်နှင့် ပြဿနာတွေ တရိပ်ရိပ်တက်လာပေပြီ။ယခုမင်းတြားကြီး၏သမဆိုင်မှတဆင့်ပေးမည့် နို့ဆီခွက်သည် တအ်ိမ်ထောင်မှတခွက်သာ ပေးသနားတော်မူမည်ဟူ၏။ မိသားစုတိုင်းလည်း တအိမ်ထောင်မဖြစ်ကြရကားပုံစံ၁၀ ဆိုသဟာပြ၍ ထုတ်ရမည်ဆိုသောအခါ ခက်နေကြပေပြီ။ အချို့လည်း အနှီရွာ၊ဤရွာ၊ ထိုရွာမှလွှဲ၍ ဘယ်မှမရောက်ဖူးမှန်းသိပေသည့် ရွာသားမှန်ကြောင်းသူကြီးဆီလျှောက်လွှာတော်တင်ကြရ၊ ပြီးရင် ပုံစံ ၁၀ ဆိုသဟာလုပ်ဖို့စိုင်းပြင်းကြရသည်။
အိမ်မှာ အထိုင်ဖုန်းလုပ်ထားမည်၊ မထားနိုင် ငါခါးငါချိပ်မည်၊ကျွန်တော့်ခါးမှာချိပ်မည်၊ ကျွန်မခါးချိပ်မည်၊ သားချိပ်မည်၊သမီးချိပ်မည်၊ အိမ်ထောင်ကျပြီးသားသူတွေနှင့်မဆိုင်စသဖြင့် မိသားစုတွင်းအက်ကြောင်းကြီးလည်း ထင်လာချေပြီ။ နို့ဆီခွက်မန်ခုတ်နေကြပေပြီ။
မင်းတြားကြီးသည် တအိမ်ထောင်ကို ဖုန်းတလုံးနှင့်ပြဿနာဆယ်ခုပေးလိုက်သည်နှင့်တူနေပေချေတော့သည်တကား။ပုံစံ ၁၀ နှင့် ဆက် စပ်ပတ်သက်သူ၊ ပုံစံ ၁၀ ကိုင်တို့ကား ခွေးဒံပေါက်တွေ့သ ကဲ့သို့တည်း။မိတ္တူဆိုင်များဆိုသဟာ လေတချွန်ချွန်နှင့် တွန်ချင်တိုင်းတွန် ကချင်တိုင်းက အမောက်ကလေးတသသလုပ်နေကြပေတော့သည်။ကယ်ပါမှာမွေး၊ ကယ်ပါသွေးအပြည့်၊ ကယ်ပါမြေနေ၊ ကယ်ပါရေ သောက်၊ ကပ်ပါတပ်မတော်၏ ကျွန်သဘောက်များကား အခြားတပါးမှလာသောတရုတ်ကုလားများကဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်နှစ်ခုသုံးခု ကိုင်ဖို့ထား၊တခုတောင်မရှိကြသည်မို့ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူပြဖို့လည်း ခက်နေကြပြန်ချေသေးသည်။
ရပြန်လျှင်လည်း ၁၅ ရက်အတွင်းမှအစပြု၍ ဟုတ်သော်ရှိ၊ မဟုတ်သော်ရှိ ဟယ်လိုဟယ်လိုလုပ်နေရမည်၊ လစဉ်လတိုင်း နိစ္စပတ်ဝတ်အနေနှင့် အမြဲဟယ်လိုရမည်၊မလုပ်လျှင် ပြစ်ဒဏ်ထားမည်ဟူ၏။
မင်းတြားကြီး၏နို့ဆီခွက်စီမံကိန်းသည် ငတို့အတွက်မဟုတ်ချေတကားဟုညည်းထွားလာကြကုန်ပြီ။ ပိုဆိုးသည်ကား ဘုန်းတော်ကြီးများနှင့် သီလရှင်ဆရာလေးများပေတည်း။
ကယ်ပါတိုင်းဘာသာရှေ့ရေးကား ရင်လေးဖွယ်အတိဖြစ်နေချေပြီတည်း။တချို့ဘုန်တော်ကြီးများ၊ သီလရှင်ကြီးများ မတွေးရဲသော်လည်းငယ်ရွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်များကား အောက်ပါအတိုင်းစဉ်းစားခန်းဖွင့်နေကြပေပြီ။နို့ဆီခွက်တလုံးရဖို့ အရင်ဆုံး လူထွက်၊ ထိုမှနောက်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်၊ အိမ်ထောင်ပြု။ ထိုမှနောက်၌ တအိုးတအိမ်ထူပြီးသကာလပုံစံ ၁၀ လျှောက်ထား။ သို့ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသောအခါမှနို့ဆီခွက်တလုံးရရန်အတွက် သူကြီးဆီ လျှောက်လွှာတော်ဆက်ရပေတော့မည်ဟူ၏။
သို့မှသာ၊ မဟုတ်လို့ကတော့ " ဘယ်သောအခါမှ ဖုန်းနဲ့ကိုယ် နီးရပါ့မယ်မောင်ကြံရွယ် နတ်ပန်းထက်ပင် ခူးရခက်သေးတယ် " ဖြစ်နေချေ တော့မည်တကား။ ကယ်တော်မူကြပါခင်ဗျား .....
No comments: Labels: staire,ကယ်ပါတိုင်းသား